I-Apple ithathele ingqalelo "iNkampani engumzekelo" ekuthengweni kwezinto zokwenza imveliso eAfrika | Ndisuka mac
I-Apple ithathele ingqalelo "iNkampani engumzekelo" ekuthengeni izinto zokwenza imveliso eAfrika
U-Apple ufumene ingqwalaselo eyonelisayo kwimibutho yezokusingqongileyo ngendlela yokufumana amandla afunekayo ekwenziweni kweemveliso zayo. Ihlala ikhuthaza imikhankaso yabanikezeli bayo ukuze ilungelelanise iinkqubo zayo zemveliso kumandla ahlaziyekayo. Okwangoku ngaphezulu kwe-90% ifunyenwe ngenxa yamandla ahlaziyekayo. Namhlanje siyayazi ingxelo ebizwa Ukusekwa kweenkampani kwimbambano yezimbiwa ngo-2017, enika iApple indawo enelungelo kunye nelungelo ekufumaneni izimbiwa ezivela eAfrika, zokwenza izinto. Iapile kuqala, ilandelwe yiAlfabhethi (Google), HP, Microsoft kunye ne-Intel, ngokulandelelana.
Ingxelo ihlalutya iinkampani ezingama-20 ezithenga izinto ezingafunekiyo kumazwe aseAfrika. Bahlalutya iinkampani ezidla izixa ezikhulu ze: tin, tungsten, tantalum kunye negolide. Ezi bhetri ziluhlaza zisetyenziselwa ukwenza izinto zombane zabathengi kunye nezacholo. Kwamanye amazwe ezwekazi, ngezizathu zongquzulwano ngezixhobo, amalungelo abasebenzi akahlonitshwa kwaye inqanaba likulungele ukuhlalutya ukuba zeziphi iinkampani "ezishenxayo" ezivela kumazwe anengxabano kwaye zithenge ngexabiso elifanelekileyo. Iindidi ezixabisekileyo zokufunda zezi zilandelayo:
Ngenxa yokukhangela ngenyameko kunye neengxelo zokufumana iMinerali yoNgquzulwano.
Ukufumana ungquzulwano kwezimbiwa eziSimahla yaseCongo, ngokukodwa iGolide
Inkxaso kunye noPhuculo kubomi babahlali basezimayini Umdwebi kwiMpuma yeCongo.
Ukukhuselwa kweziMbiwa ngaphandle kweNgxabano.
I-Apple kuphela kokufumana iziphumo ezonelisayo kudidi ngalunye. Kodwa inkampani ayipheleli apho. Ngokufanelekileyo, setha izilumkiso ezinxulumene neengxelo kunye nokuthatha inyathelo ngokususa abathengisi kunye nabanye abathengisi kumxokelelwano wakho wokunikezela osilelayo ukufikelela kwimigangatho yakho.
Inkampani yeapile awunangxaki ekwabelaneni nabanye ngeengxelo zakho ukuphucula iinkqubo zokufumana izimbiwa.
I-Apple ayifumananga kuphela iindlela ezingcono zokujongana neziganeko ngaphakathi konikezelo lwazo, ikwancedile ukuphuhlisa amaqonga abelwe kwindawo enye kuvavanyo lomngcipheko ezinye iinkampani ezinokuzisebenzisa. Le nzame yongezelelekileyo inegalelo ekomelezeni konke ukukhuthala okufanelekileyo kokunikezelwa kweeminerali zongquzulwano.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » I-Apple ithathele ingqalelo "iNkampani engumzekelo" ekuthengeni izinto zokwenza imveliso eAfrika
I-Apple iqhubela phambili kwaye ikhuphe iMacOS ePhakamileyo yeSeta beta 4 yabaphuhlisi
Yonwabela iipodcast zakho ozithandayo ngeDowncast